Princess Dayareese (2018) | MM Movie Store
Comedy Drama Uncategorized
ဒီဇာတျလမျးလေးမှာတော့ Movie name ထဲက အတိုငျးဒိုငျယာနာရိဈဆိုတဲ့ ကောငျမလေးကတော့ အဓိကဇာတျကောငျပေါ့သူ့မှာမိဘတှမေရှိတော့ဘူးသူ့အဖဘေကျက မိသားစုကခမျြးသာတယျသူ့အဖဆေုံးတော့ သူ့အဖိုးက သားမိနှဈယောကျကို အိမျပျေါကနှငျလိုကျတယျ
နောကျတော့ သူ့အမကေလညျး ဆုံးပါးသှားပွီး အဒျေါရဲ့မိသားစုနဲ့အတူတူနတေယျအဲ့အဒျေါမှာ သားတှလေညျးရှိတယျ.သူတို့နဲ့အတူပေါငျးပွီး မငျးသမီးက ဖိလဈပိုငျကိုအလညျအပတျလာတဲ့ နိုငျငံခွားတှကေို လိမျစားတဲ့သဘောမြိုးပေါ့.အဲ့လိုနဲ့ပိုကျဆံရှာတယျ. သူတို့ဘဝက အဆငျမပွလှေတော့ ပိုကျဆံအမြားကွီးလိုခငျြကွတယျ.
တဈနတေ့ော့ သူနဲ့ရုပျခငျြးဆငျတဲ့ အျောရို့ဆိုတဲ့တိုငျးပွညျက မငျးသမီးတဈပါးက သူ့ကိုပွနျပေးဆှဲပွီးအဲ့မငျးသမီးကသူ့ခဈြသူကိုရှာခငျြတာကွောငျ့ရကျ၄၀အတှငျး သူ့နရောမှာ ခဏအစားဝငျပေးဖို့ ငှနေဲ့အပေးအယူလုပျတယျ.မငျးသားနာမညျကတော့ ခေးလပျ.သူက video မှတျတမျးရိုကျတဲ့သူပေါ့.
မငျးသားကလညျး အျောရို့တိုငျးပွညျမှာ documentary တဈခုရိုကျဖို့သှားရငျး မငျးသားနဲ့မငျးသမီး ဘယျလိုဆုံတှကွေ့မလဲသူတို့နှဈယောကျကွားက အခဈြကိုဘယျလိုပျေါလှငျအောငျပွထားမလဲပွီးတော့…အဒျေါမိသားစုနဲ့မငျးသမီးကွားက မိသားစုသံယောဇဉျလေးတှကေိုလညျး နှေးနှေးထှေးထှေးမွငျတှရေ့မှာဖွဈပါတယျ.
Background music လေးတှလေညျး တကယျကောငျးပါတယျ🖤 ကွညျ့ရှုပေးကွပါဦးရှငျ
ဒီဇာတ်လမ်းလေးမှာတော့ Movie name ထဲက အတိုင်းဒိုင်ယာနာရိစ်ဆိုတဲ့ ကောင်မလေးကတော့ အဓိကဇာတ်ကောင်ပေါ့သူ့မှာမိဘတွေမရှိတော့ဘူးသူ့အဖေဘက်က မိသားစုကချမ်းသာတယ်သူ့အဖေဆုံးတော့ သူ့အဖိုးက သားမိနှစ်ယောက်ကို အိမ်ပေါ်ကနှင်လိုက်တယ်
နောက်တော့ သူ့အမေကလည်း ဆုံးပါးသွားပြီး အဒေါ်ရဲ့မိသားစုနဲ့အတူတူနေတယ်အဲ့အဒေါ်မှာ သားတွေလည်းရှိတယ်.သူတို့နဲ့အတူပေါင်းပြီး မင်းသမီးက ဖိလစ်ပိုင်ကိုအလည်အပတ်လာတဲ့ နိုင်ငံခြားတွေကို လိမ်စားတဲ့သဘောမျိုးပေါ့.အဲ့လိုနဲ့ပိုက်ဆံရှာတယ်. သူတို့ဘဝက အဆင်မပြေလှတော့ ပိုက်ဆံအများကြီးလိုချင်ကြတယ်.
တစ်နေ့တော့ သူနဲ့ရုပ်ချင်းဆင်တဲ့ အော်ရို့ဆိုတဲ့တိုင်းပြည်က မင်းသမီးတစ်ပါးက သူ့ကိုပြန်ပေးဆွဲပြီးအဲ့မင်းသမီးကသူ့ချစ်သူကိုရှာချင်တာကြောင့်ရက်၄၀အတွင်း သူ့နေရာမှာ ခဏအစားဝင်ပေးဖို့ ငွေနဲ့အပေးအယူလုပ်တယ်.မင်းသားနာမည်ကတော့ ခေးလပ်.သူက video မှတ်တမ်းရိုက်တဲ့သူပေါ့.
မင်းသားကလည်း အော်ရို့တိုင်းပြည်မှာ documentary တစ်ခုရိုက်ဖို့သွားရင်း မင်းသားနဲ့မင်းသမီး ဘယ်လိုဆုံတွေ့ကြမလဲသူတို့နှစ်ယောက်ကြားက အချစ်ကိုဘယ်လိုပေါ်လွင်အောင်ပြထားမလဲပြီးတော့…အဒေါ်မိသားစုနဲ့မင်းသမီးကြားက မိသားစုသံယောဇဉ်လေးတွေကိုလည်း နွေးနွေးထွေးထွေးမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်.
Background music လေးတွေလည်း တကယ်ကောင်းပါတယ်🖤 ကြည့်ရှုပေးကြပါဦးရှင်